Ukubuyiselwa kwabathengisi beDijithali - I-Thumela RELAY
Ama-Job OffersI-Cameroon - Izipesheli Zomsebenzi
By brylandobe On Juni 16, 2020
Indlela Yekubumbana ihlose ukuba yingosi yabosomabhizinisi abasebasha ezwenikazi lase-Afrika. Ixhasa ukuthuthukiswa kwezwekazi lethu ethandekayo ngokushisekela amandla, kanye nentshisekelo yobusha bayo. Ukholelwa ekubeni ngcono kubo bonke laba bantu abasha base-Afrika abalahlekelwe yithemba kulelizwekazi, umatrix osondlayo wesintu. Zivumele ube yingxenye ebalulekile yaleli phupho lifezekile ngawe, ipulatifomu yethu kubo bonke ...
Siqoqa izinsizakalo zezentengiso ngezidingo zethu zokubonakala okuku-inthanethi kanye nemisebenzi yokudala yokufundeka.
Uzoqeqeshwa kusenesikhathi, futhi ngemuva kokuqinisekiswa, uzobandakanyeka ngokushesha.
Umholo wakho uzoqhamuka kuma-CFA ama-CFA angama-50 000 uye kuma-franc ama-CFA angaphezu kuka-150, uma usebenza futhi ulandela ngokuqinile imiyalo yethu.
Ukunikezwa kwemisebenzi: Umsizi (we) uMgcinimafa - I-Afriland First Bank…
ngifuna umphathi wekhreyithi yesinkwa kuphela ku-…
ukuqashwa kwama-Microfinance Collection Agents
Ukuhlala ungumngane wakho no-exes wakho, umbono omuhle noma omubi?